Amathiphu Wokushayela Emvuleni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amathiphu okushayela emvuleni
Ukuthatha imoto ngosuku oluna imvula kungaba yinto emnandi kakhulu kwabanye, ngoba kubenza bazizwe bepholile futhi bekhululekile, kanti abanye abayithandi. Kodwa-ke, uma kukhona okumele sikwenze kuhlale kunjalo hlonipha imithethonqubo yokuphepha emgwaqeni, futhi ikakhulukazi ngezinsuku lapho imvula ina.
Ukugwema izinkinga, sikunikeza uchungechunge lwe- amathiphu okushayela emvuleni.
1 Gcina ibanga eliphephile
2 Gwema amadaka
3 Bheka isimo samabhulashi
4 Beka amalambu
Gcina ibanga eliphephile
Kuyinto ebaluleke kunazo zonke. Uma lo ophambili eshayisa ibhuleki, imoto yakho kumele ibe nesikhala esanele sokuma ngesikhathi. Imigwaqo uma imvula ingashelela kakhulu, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ushiye amashumi amashumi amamitha phakathi kwezimoto. Isibonelo:
Uma ushayela emgwaqeni onesivinini esiphezulu esingu-90km / h: ibanga lokuphepha kumele libe ngamamitha angama-81.
Uma ushayela emgwaqeni onesivinini esiphezulu esingu-100km / h: ibanga lokuphepha kumele libe ngamamitha angama-100.
Uma ushayela emgwaqeni onesivinini esiphezulu esingu-120km / h: ibanga lokuphepha kumele libe ngamamitha angama-120.
Noma zibukeka zingasho lutho kuwe, bagweme. Amadamu avimbela amathayi ukuthi anamathele kahle emgwaqeni, kangangoba ukubopha amabhuleki kungazelelwe kungadala ukuqhuma kwamanzi, futhi ungalahlekelwa ukulawula imoto.
Bheka isimo samabhulashi
Ngenkathi ushayela kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukubona, ngakho-ke uma kufanele ushayela emvuleni qiniseka ukuthi ama-wiper ewindow asesimweni esihle.
Uma lina, ukubonakala kuvame ukuba phansi noma kube phansi kakhulu, ngakho-ke kufanele uvule imishayo ephansi, futhi uma ungaboni lutho, namalambu enkungu angemuva ukuze abanye abashayeli bakubone futhi ngaleyo ndlela bagweme ingozi.
Ngalezi zeluleko, ungashayela emvuleni ngaphandle kokukhathazeka 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amathiphu okushayela emvuleni